कहाँ पुग्यो निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान ? - Sagarmatha TV
कहाँ पुग्यो निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान ?
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त बलात्कार पछि भएको हत्या प्रकरणको तीन वर्ष वितको छ । २०७५ साउन १० गते साथीको घरबाट बेपत्ता भएकी निर्मलाको शव भोलिपल्ट घरनजिकैको उखुबारीमा भेटिएको थियो । तर विडम्बना घटनाको तीन वर्ष बित्दा समेत दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
निर्मलाको न्यायका लागि देशब्यापी प्रदर्शन भयो । आन्दोलनका क्रममा धेरै घाइते बने एकजनाको त ज्यान समेत गयो । तरपनि अहिलेसम्म निर्मला र निर्मलाको परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
तत्कालिन आइजीपि सर्वेन्द्र खनाल, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मलाका हत्यारालाई कारबाही गर्छौं, हत्यारा उम्कन पाउँदैन भनेर आशा देखाए । तर अझै पनि दोषीको अत्तो पत्तो छैन । अहिले नयाँ बनेको सरकारबाट न्याय पाउने आशमा छन् निर्मलाका परिवार । यता प्रहरी प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवर निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेकाले दोषी पक्राउ हुने बताउँछन् ।
पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी आन्दोलनको भिडबाट नभई अनुसन्धानमा लक्षित भएर दोषिसम्म पुग्नु पर्ने बताउँछन् । प्रहरीले निर्मला प्रकरणको दोषि पत्ता लगाउन नसक्दा प्रहरी मात्र नभई सरकार पनि आलोचित बनेको छ । त्यसैले यथासक्य चाँडो अनुसन्धानको निश्कर्षमा पुगी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही हुनु आवश्यक छ ।